ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲပေး - ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့မဲပေး | USAHello | USAHello
ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲပေး - ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့မဲပေး
ယူအက်စ်အေဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်, အရာနိုင်ငံသားများကသူတို့ကိုကိုယ်စားပြုသူကိုဆုံးဖြတ်မဲပေးဆိုလိုတယ်. သင့်ရဲ့မဲအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်အသိုင်းအဝိုင်း၌သင်တို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်မည်သူကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ဟုပြောဆိုကြပါပြီ, သင့်ရဲ့ပြည်နယ်, နှင့်အမျိုးသားရေးအစိုးရအတွက်. မဲပေးနိုင်သူတွေအကြောင်း Read. ဘယ်မှာလေ့လာပါ, ဘယ်လိုလဲ, အဘယ်ကြောင့်မဲပေး.
သင်သည်သင်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ရသည်အထိသင်ကမဲပေးမပေးနိုငျ. မဲဆန္ဒပေးရန်, နိုင်ငံသားများဖြစ်ရမည် 18 အသက်အနှစ်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်မဲပေးမှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်. သင်တစ်ဦးပြစ်မှုထင်ရှားရာဇဝတ်မှုတွေဟာလျှင်သင်မဲပေးမပေးနိုငျ. သင်မဲပေးနိုင်အောင်နိုင်ငံသားဖြစ်ဟန်ဆောင်နေလျှင်, သငျသညျကိုဖမ်းဆီးမည်ဖြစ်ပြီးအကျဉ်းချစေခြင်းငှါ.
သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပေါ်တွင်သင်၏နာမကိုအမှီချပြီးနည်းလမ်းများမဲပေးရန်မှတ်ပုံတင်. သင်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် mail ဖြင့်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျရွှေ့ပါက, အသစ်ရဲ့လိပ်စာနှင့်အတူနောက်တဖန်သင်သည်မှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်.
သငျသညျအခြို့သောအခြေခံကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အတူပုံစံဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်. အများစုမှာအိမ်ထောင်စုမေးလ်ထဲမှာမဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိ. တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှတ်ပုံမယ့်နောက်ဆုံးနေ့ရှိပါတယ်. တိုင်းပြည်နယ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနောက်ဆုံးနေ့ရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်နောက်ဆုံးနေ့ကိုရှာပါ နှင့် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့ဘယ်လို.
သငျသညျမဲပေးရာအရပ်ဟာမဲရုံဟုခေါ်သည်. မဲရုံအများအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့ကျောင်းများအဖြစ်အများပြည်သူအဆောက်အဦများတွင်တည်ရှိသည်, အသင်းတော်များ, သို့မဟုတ်အားကစားခန်းမ. သင်တစ်ဦးကိုသုံးနိုင်သည် သင့်ဒေသခံမဲရုံကိုရှာဖွေ Locator.
သင်လူတစ်ဦးအတွက်မဲပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိလျှင်, သင်တစ်ဦးအဲတော့မဲတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. သငျသညျအိမ်တွင်မဲထွက်ဖြည့်ပါကမေးလ်ကြောင့်ယခုလိုမဲကိုလည်းမေးလ်-in ကိုမဲဟုခေါ်သည်. ဒါဟာရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းကွာနေသောလူများအတွက်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်မဲရုံအရပ်မှမရနိုငျသောလူတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဲပေးလိုလျှင်, သင်သင့်အိမ်မှာနေထိုင်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့နေထိုင်ရာအထောက်အထားရောက်စေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဒါကတစ်ဦး၏ ID ကဒ်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်တစ် utility ကိုဥပဒေကြမ်း, ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်သင်၏လိပ်စာနှင့်အတူဘဏ်ကြေညာချက်သို့မဟုတ်စစ်ဆေးမှုများ. သငျသညျရှေ့တျော၌မဲပေးကြလျှင်, သငျသညျနေထိုင်ရာအထောက်အထားရောက်စေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး.
တစ်ဦးကစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်ကမဲအသုံးပြုနိုင်သည့်တဲသင်သည်သင်၏နာမကိုအမှီမမေးနှင့်သင်ပြပါလိမ့်မယ်. တစ်ဦးကမဲပေးတဲငယ်လေးတစ်ဝင်းဖြစ်ပါသည်. သငျသညျမဲပေးနေစဉ်ဒါဟာသင် privacy ကိုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု. သငျသညျအင်္ဂလိပ်စကားမပြောနိုင်လျှင်, သင်မဲကိုကူညီတဲသို့တစ်စုံတစ်ဦးကဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်. အချို့သောပြည်နယ်များရှိ, သင်သည်သင်၏ဘာသာစကားဖြင့်တစ်မဲရနိုင်မည်အကြောင်း. သငျသညျဥပဒေများ ပတ်သက်. ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏အမည်များနှင့်အတူစက္ကူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်. သင်တစ်ဦးကလောင်အမည်နဲ့ form မှာဖြည့်ဆည်းခြင်းအားဖြင့်သင့်ရွေးချယ်မှုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်. သင်ပြုသောအခါ, သင်သည်သင်၏မဲပိတ်လိုက်ပြီးတစ်သေတ္တာထဲသို့သွင်းထားလိမ့်မယ်.
တစ်ဦးကမူလတန်းနိုင်ငံရေးပါတီများလာမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဘို့မိမိတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရွေးချယ်ပါအရာအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်တယ်. အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်လောင်းအခြားနိုင်ငံရေးပါတီသို့မဟုတ်ပါတီများအနေဖြင့်အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆန့်ကျင်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြေး. USA တွင်, နှစ်ခုကအဓိကနိုင်ငံရေးပါတီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့်ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီများမှာ. အချို့သောပြည်နယ်များရှိ, နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံသာမဲဆန္ဒရှင်မူလတန်းအတွက်မဲပေးလို့ရပါတယ်.
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်, မဲဆန္ဒရှင်မူလတန်းရွေးကောက်ပွဲများ၏ဆုရရှိသူအကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ. တစ်ဦးကအမျိုးသားရေးရွေးကောက်ပွဲတိုင်းနှစ်နှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပလျက်ရှိသည်. အဆိုပါသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတိုင်းလေးနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပလျက်ရှိသည်.
မဲဆန္ဒရှင်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကရှေးခယျြတဲ့အခါမှာဒေသခံရွေးကောက်ပွဲများမှာ, တရားသူကြီးတွေ, အုပ်ချုပ်ရေးမှုး, နှင့်အခြားဒေသဆိုင်ရာအရာရှိများက. တစ်ပြည်နယ်၏ဒေသတိုင်းဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရက်စွဲများရှိပါတယ်. သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေ.
မဲပေးသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာခြားနားချက်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမျှဝေဖို့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏မြို့နှင့်တိုင်းပြည်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရှေးခယျြလိုကူညီပေးနိုငျ.
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအချက်အလက်တွေကနေကြွလာ အမေရိကန်အစိုးရ, Vote.org, နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်.